Ikhamera yeBhotile engenazintambo efihliweyo, ibhetri: 15000mAh, Ukurekhoda iiyure ezingama-50 (SPY042) | Izisombululo ze-OMG
I-Portable Hidden Wireless Bottle Ikhamera - [720P], Ibhetri: 15000mAh, Ukurekhoda iiyure ze-50 (SPY042)
Kulula ukudibanisa ikhamera efihliweyo kunye nomnxeba wakho nge-APP Camwf, ukujonga ukutya okunokuphila kwiselula yakho, phawula apha ufuna ukudibanisa i-AP yekhamera kuqala, uze uthumele kwi-wifi yakho ngokukhululekile kwaye kulula. Thatha ixesha lakho.
Ividiyo ecacileyo neyobukhali esuka kwiikhamera ze-HD kwaye ubukele imilayezo ephumayo okanye erekhodiweyo esuka kwifowuni yakho, iPC
Izaziso ze-App kunye nesigijimi esichukumisayo, ukubuyela kumsakazo ngokukhawuleza ngale myalezo, qalisa ukurekhoda xa uqaphela, kufuneka ufake ifowuni encinci ye-sd. Zonke iirekhodi zixesha / idethi ifakwe kwisicelo sezokhuseleko.
Ukuxhasa ukujonga okukude, ukulandelelana, phulaphula into abayithethayo kwicala lekhamera, eyakhelwe ngaphakathi 15000mAh ibhetri, umbono ongabonakali ebusuku ubhekiswe kwii-7 ezinyaweni.
Nceda qaphela: Oku yi 2.4ghz inkxaso yekhamera kwaye ayixhasi 5ghz amanethiwekhi.
Umqhubi we-IR: 10ft-15ft
I-lens ebanzi: 65 °
Ixesha / idethi ifakwe:Ewe
Ukungena ngemvume komsebenzisi ngokufanayo. indebe: ukuya kwi-10
Ixesha lokuphila ibhetri epheleleyo: iiyure 50
Ukuhlaziya ibhetri epheleleyo: iiyure 30
Sensor Image: HD1080P / 30fps
Umsindo: I-F2.2 FOV: 160º: 25cm Infinity
Inqunu: IEEE802.11 b / g / n
Imoya engenantambo: AP / STA
Ividiyo yeWIFI yeVidiyo: 720P 1280 × 720
Ifowuni yeWIFI yeVidiyo: 1080P 1280×720,640×480,320×240
Ifomathi zoxinzelelo: H.264 Ukwahlula kabini
Ividiyo ye-SD: Ukuxhaswa ngefowuni ukukhuphela ividiyo kwiiselula
Support: IOS, i-Android APP, i-XP, i-Win7
I-Cup Cup Unikelele I-Camera Ikhamera: umncedisi onyanisekileyo kuwe xa ufuna i-spy
ikhamera okanye ikhamera efihliweyo ukujonga ikhaya lakho okanye iofisi. I-lens encane eyakhelwe ngaphakathi
ukufanisa indebe eyenzelwe ukubonakala ngathi nayiphi na indebe, iphathekayo kwaye isebenzisekile ukuyisebenzisa
1. Hlanganisa AP ikhamera kaThixo, umzekelo, xa uqhagamshela kwisixhobo Bluetooth, kufuneka uvule iselfowuni yakho uze ukumatanisa le ID bluetooth, ngoko buyela app for kokuxhuma ikhamera
2. Ukuba uyifumana ayikwazi ukuskena ikhowudi ye-QR, nceda utsho utshintshe isikhokelo, ngoko kufanelekile.
1 x Cup ikhamera
8.1 x 4.4 x 2.9 intshi
14066 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-22 Namhlanje